Tumblr Gallery - Sida loo dar Awesome Gallery in Tumblr Post
> Resource > Video > Sida loo dar Awesome Gallery in Tumblr Post
Tumblr laga yaabaa in mid ka mid ah ugu sahlan in ay isticmaalaan madal blog adduunka. Qasabno gudahood, waxaad si fudud u abuuri karaan blog ah oo lacag la'aan ah iyo bilaabi hubkaa on Daqsi. Arrinta No aad ka eegay Internet-ka ama sawirka la telefoonka gacanta, aad daabici karo post a in ilbiriqsi. Xataa waxaad isticmaali kartaa Tumblr dhex barnaamijyadooda iPhone aad.
1 dar images u Tumblr gallery
In interface saaxir-style ah, waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan photos hore. Dhammaan qaabab loo jecel yahay image waxaa taageera, sida JPG, PNG, jpeg, BMP, GIF, iwm qalabka tafatirka Photo waxaa sidoo kale ka mid ahaa. Waxaad si fudud u horumarin karaan sawirkaaga by qoqobada, lana siii, oo ku daray saamaynta gaar ah.
2 Dooro Template Gallery ah
Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay dhakhso u jeedi sawir galay slideshow la yaab leh ama gallery, taas oo ku xidhan template aad dooratay. By default, waxaad ku eegaan doonaa gallery la arrimo ku cad codsatay. Just guji template kale si ay u eegis iyo beddelo ilaa aad ku qanacsan tahay.
In ka badan 60 2D cajiib ah ama sawir 3D arrimo gallery ayaa diyaar u ah in ay isticmaalaan. Foomamka waxay u suurto qof si ay u abuuraan oo ay slideshow u gaar ah oo sawir leh iyo gallery sida pro ah.
3 : naadiya iyo aad u hesho xeerka
Uma baahnid in aad naftaada ku qor code ah. Marka aad daabici slideshow / gallery ee Tumblr, tusaale ahaan xeerka la siin doonaa. Just nuqul oo paste in aad post blog Tumblr. Kaliya u hubso link gallery waa xaq.
Ka dib markii in, aad Cudarada karaa Tumblr Gallery si aad bogga:
Hadda marka aad qoraal blog Tumblr ah, beddelaan aragtida xeerka iyo paste code ka galay boostada. Markaas waxaad ku eegaan kartaa boostada iyo Tumblr gallery.
The code saxafiyiinta gallery Tumblr u ekaan kartaa sidan. Hubi filename iyo waddada waa xaq. Waxa kale oo aad is bedeli karto dhimaya width oo sarajooggeeduna wuxuu si loo waafajiyo baahidaada, laakiin xasuuso inaad haysato saamiga.
<param name = "movie" Qiimaha = " pathto / filename.swf "/>
<socosho SRC = " pathto / filename.swf "...> </ socosho>
Ugu dambeyntii daabacaan aad post Tumblr oo aad ka heli gallery isfaydi Tumblr ay u soo jiidan doonto dalxiisayaasha iyo rabitaanka traffics blog.